Fitsapana ra ho an'ny antikora mandritra ny fitondrana vohoka
Antikôlôjia - fitahirizana proteinina, vokatry ny fidirana ao amin'ny vatan'ny singa vahiny, antigen. Amin'izany fomba izany, ny fampiasana ny angona azo avy amin'ny biôlôjia dia tafiditra ao anatin'io rafitra io. Ny fisian'ny rafitra toy izany ao amin'ny vatana dia manondro ny fisian'ny singa vahiny, izay matetika antsoina hoe allergen.
Izany karazana fikarohana izany, toy ny fitsapam-pitsaboana ho an'ny antikoly, dia matetika atolotra mandritra ny fitondrana vohoka. Noho ny fanampian'izany dia azonao atao ny manavaka ny fisian'ny singa proteinina maromaro amin'ny alergénie isan-karazany. Ao amin'ny fitondrana vohoka, dia nisy fanadihadiana natao ho an'ireo titulan'ireo antikôla: G, M, A, E. Noho izany, ny dokotera dia mametraka ny zava-misy ny fiarovana, ny mety hisian'ny aretina.
Inona no dikan'ny alalana TORCH?
Ity fandalinana ity dia natao miaraka amin'ny foetus manatanteraka mba hahitana antikoly amin'ny aretina toy ny toxoplasmosis, ribela, herpes, cytomegalovirus ao amin'ny vatana.
Ny fiantraikan'izany karazam-bady izany dia miteraka risika ho an'ny vehivavy bevohoka sy ny foetus, indrindra raha mitranga amin'ny trimestre voalohan'ny zaza. Matetika izy ireo no mahatonga ny fahasarotana toy ny fanalan-jaza manjavozavo, ny tsy fahampian'ny fampiroboroboana entraaterina, ny fitsaboana amin'ny ra (sepsis), ny fihenan'ny fivoahana.
Inona ny tanjon'ny fitondrana vohoka amin'ny fitsaboana amin'ny rà noho ny antibody Rh?
Ity fikarohana ity dia mamela fotoana hamantarana ny mety hisian'ny fitarainana, toy ny Rh-conflict. Amin'ireo tranga ireo rehefa misy rôma henjana ny reny amin'ny hoavy, ary ny raim-pianakaviana - tsara, dia misy ny fifanoheran'ny antigène. Vokatr'izany, ny antibody amin'ny erythrocyte an'ny zaza vao manomboka dia manomboka amin'ny fampidirana ny vatana bevohoka.
Tsara ny manamarika fa mitombo ny tahan'ny fifanoherana amin'ny isan'ny vohoka. Noho izany, amin'ny zavamananaina voalohany amin'ny vehivavy, dia manomboka mamokatra antikora ihany izy io, ary ny fifantohana izany dia tsy mahatratra ny soatoavina lehibe.
Ny vokatry ny Rh- dia ny fahafatesan'ny foetus, izay mitarika ho amin'ny fiterahana.
Inona no fanandramana antibody ho an'ny bevohoka?
Antsoina hoe antikôty antoko, antsoina hoe antikôlôgrôgrika, manomboka amin'ny fampisehoana ny rà, amin'ny alàlan'ny fifandonana. tsy mifanentana amin'ny vondrona mpandatsa-dra ny zaza ao am-bohoka sy ny reniny.
Mivoatra ao anatin'ireo tranga ireo ny ra misy ra misy ra, ankoatra azy, miditra ao amin'ny rà mandriaka. Tsara ny manamarika fa matetika no marihina fa matetika no miteraka vokatra. Ny dokotera dia manara-maso ny tonta antibody, izay ahafahana misoroka ny fivoaran'ny fahasarotana.
Ahoana no tokony handraisana ny fanadihadiana amin'ny antikora amin'ny fitondrana vohoka?
Ny fikarakarana karazana fikarohana toy izany dia midika fa ny fanarahan-dàlana amin'ny sakafo iray dia tsy azo atao. Ny hetsika ara-batana ihany koa dia tsy mahazo alohan'ny fandalinana, ny andro talohan'izay. Ny famandrihana biomaterial dia vita amin'ny ora marainan'ny andro, eo amin'ny vavony tsy misy, avy amin'ny vina ulnar.
Na mety amin'ny Citramonum bevohoka ve izany?
Honey amin'ny fitondrana vohoka
Herin'ny fo fetalin'ny herinandro
Voatifitra nandritra ny fitondrana vohoka
Uterus mandritra ny fitondrana vohoka
Fampandrosoana ny embryon amin'ny andro
Fandikana ny 1 trimès - fandikana ny vokatra
Inona no atao hoe bevohoka ectopique?
Ny zanakavavin'i Ozzy Osbourne dia naneho tamin'ny fombany "firaisankina" tamin'ireo niharam-boina tany Orlando
Sakafo miaraka amin'ny atody
Inona no hamahana ilay sifotra?
Volombava ho an'ny ririnina
Qigong ho an'ny hazavana
Make up for Halloween for girls
Mianjera amin'ny tarehy
Listeriosis amin'ny fitondrana vohoka
Fanamboarana voninkazo maina ho an'ny ao anatiny
Fanangonam-bolo - lamaody lamaody 2016
Divay fisotroana divay
Inona ilay nofinofin'ny kintana fitifirana?
Fanomezana fako - tsara sy ratsy